Madaxweyne Farmaajo: "Waxaan soo xirnay albaabki ugu danbeeyay ee is-faham la'aanta Geeska Afrika" - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Madaxweyne Farmaajo: “Waxaan soo xirnay albaabki ugu danbeeyay ee is-faham la’aanta Geeska Afrika”
Madaxweyne Farmaajo: “Waxaan soo xirnay albaabki ugu danbeeyay ee is-faham la’aanta Geeska Afrika”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii 4-aad ee Golaha Shacabka DFS, isag oo xubnaha Golaha Shacabka uga warbixiyey dadaallada dowladnimada lagu xoojinayo ee dalka ka socda.
Khudbadda Madaxweynuhu waxa ay taabanaysay dhinacyda amniga, siyaasadda arrimaha dibadda, dhaqaalaha, la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah, cafinta daynta lagu leeyahay Soomaaliya iyo barnaamijka Is-xilqaan.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalku ay ku dhisan tahay is-ixtiraam, wax-wada-qabsi iyo tixgelinta madaxbannaanida dal walba. Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in bilihii la soo dhaafay ay DFS ku mashquulsanayd xallinta isfaham darradii u dhexaysey dalalka Geeska Afrika, isaga oo tilmaamay in hadda loo gudbey marxalad khilaaf la’aan ah (Zero Conflict).
“Waxaa guul inoo ah inaynu bilihii na soo dhaafay aan dadaal ku bixinnay ka qayb-qaadashada sidii loo dhammayn lahaa isfaham darradii ka dhex jirtay dalalka Gobolka Geeska Afrika. Waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la’aanta dalalka gobolka, waxaanna u gudbeynaa marxalad ku suntan khilaaf la’aan (Zero Conflict), iskaashi iyo wax wada-qabsi.” ayuu khudbadiisa ku yiri madaxweyne farmaajo
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale carabbaabay in shirkii Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee Brussels ka dhacay bishii July ee sannadkan ay ka soo baxeen natiijooyin xoojinaya shirkii Golaha Amniga ee bishii Juun ka dhacay magaalada Baydhabo.
Madaxweyne Farmaajo oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri: “Waxaan jeclahay inaan idinla wadaago in shirkii Madasha iskhaashiga Soomaaliya ee Brussels ay ka soo baxeen natiijooyin kaabaya shirkii Golaha amniga ee horaantii Bisha Juun ka dhacay magaaladda Baydhabo halkaas oo lagu saxiixay hanaanka doorasho iyo kheyraad wadaag ee dalka. Shirkaas oo isugu yimaadeen Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah, iyo Gobolka Banaadir, wuxuuna sii xoojiyey iskaashiga ka dhaxeeya Somalia iyo beesha caalamka.”
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xoogga saartay sidii Soomaaliya u soo ceshan lahayd maqaamkii ay ku lahayd Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka, inkastoo ay khilaafaad kasoo wajaheen madaxda maamul goboleedyada dalka.
TOOS: Daawo Khudbadda Madaxweynaha ee Furitaanka kalfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka
Mooshin laga abaabulayo Guddoonka Baarlamaanka Puntland
Guddoomiye Mursal oo magacaabay Guddi ka warbixinaya Covid19